Qaar kamid ah Dhaqaatiirta Afrika oo Shir ku leh Mombasa – Radio Daljir
Seteembar 1, 2015 8:08 b 0
Talaado, September 01, 2015 (Daljir) —Wufuud dhaqaatiir ah iyo aqoonyahano dhinaca caafimaadka ah oo ka kala socda 22 wadan oo African ah ayaa isugu tagay magaalada Mombasa, si ay uga qeyb galaan shir weyne halkaasi ka dhacaya.
Kulankaan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka ay ku bahoobeen dhaqaatiirka Africa ayaa looga hadlayaa horumarinta arrimaha ku saabsan sharciyeynta howlgallada dhaqaatiirka ee guud ahaan dunida.
Madaxa maamulka sare ee ee ururka dhaqaatiirta Kenya Mr Daniel Yumbya ayaa sheegay in shuruucda ay dajinayaan ay ka hor tagi doonaan dhaqaatiirta aan diiwaan gashaneyn ee ka howlgala wadamada ka duwan dalalka ay markii hore ka sharciyeysnaayeen, kuwaasoo halis galinaya nafta dadka bukaanada ah.
Dr Yumbya ayaa tusaale ahaan usoo qaatay in hadii dhaqtar ka howlgala Kenya oo diiwaan gashan uu aado wadan sida Botswana oo kale ah looga baahanyahay in uu wadankaasna iska diiwaan galiyo.
Sidoo kale dhaqaatiirta ayaa shirkooda uga hadli doona in ogolaansho shaqo looga baahanyahay dhaqaatiirta ajaanibta ah ee howlgallada u yimaada qaaradda Africa.
Mushkilado badan oo ka taagan arrimahaasi ayaa la filayaa in la isku waafaqo sidii looga gudbi lahaa.
Dhaqaatiirta Kenya ayaa dhankooda sheegaya in wallow ay jirtop caqabad dhinac maamul goboleedyada iyo waaxyaha caafimaadka ka taagan hada loo baahanyahay in xal rasmi ah la helo.
Dhegeyso: Adeega E-Dahab ee Shirkadda Dahabshiil oo ku baahay deegaanada Puntland